अष्टाङ्ग योग | पतञ्जली योग दर्शन: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि
अष्टाङ्ग योग का सम्बन्धमा लेखिएको पहिलो आधिकारिक ग्रन्थ पतञ्जली योग-सुत्र हो । योगश्चित्तबृत्ति निरोध भनेर यसमा योगलाई चित्तबृत्तिबाट निरोधको अवस्था भनेको छ । अष्टाङ्ग योग का बिभिन्न आठ चरण पार गरेर त्यो अवस्था हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बैज्ञानिक ब्याख्या छ त्यहाॅ ।
१. यम: अष्टाङ्ग योग पहिलो चरण
अष्टाङ्ग योग को पहिलो पाइला यम हो । यम भनेको नैतिकता हो । आफुलाई नैतिक बलमा जागृत बनाउनु यसको उद्देश्य हो । नैतिकता सफल जीवनको पहिलो आधार हो । त्यसैले पतञ्जलीले यसलाई सुरूमा नै राख्नुभयो । नैतिकताको अभ्यासबाट नै योगको बाटो सुरू हुन्छ ।
बैज्ञानिकहरूले पनि नैतिकवान ब्यक्तिलाई कम मानसिक समस्या हुने कुरा प्रमाणित गरेका छन् । सफलताको नियमको आधार पनि नैतिकता नै हो । पतञ्जलीले नैतिकतालाई पनि बिभिन्न पाॅच भागमा बिभाजन गरेका छन् । ती निम्न छन्:
हिंसा तीन प्रकारका हुन्छन्
♢ कायीक: भौतिक शरीरद्वारा अरूलाई चोट पु-याउनु ।
♢ बाचिक: बोलेर अरूलाई चोट पु-याउनु ।
♢ मानसिक: कसैको बारेमा अहित सोच्नु या अरूलाई चोट परोस् भनेर कामना गर्नु ।
यी तीनै हिंसा नगर्नु अहिंसा हो । बुद्धको मुख्य उपदेश पनि यही हो । अरूलाई चोट पु-याउने उद्देश्यले कुनै कार्य गर्नु हुॅदैन । यदि नजानेर चोट पुगेको छ भने माफी माग्नुपर्छ । यदि सीधै गएर माफी माग्न गाह्रो हुन्छ भने मनमनमा माफी माग्नुपर्छ ।
अहिले अमेरिका र युरोपलगायत बिकसित देशहरूमा एउटा नयाॅ ब्यबसायिक अभियान सुरू भएको छ । त्यो पनि अहिंसाको ब्यबहारिक प्रयोग हो । Win-win Theory. दुबै पक्षको हीतका लागि काम गर्ने । सफलताका गुरूहरूले पनि सफलताको एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण पाइलाका रूपमा यो सिद्दान्तलाई लिएका छन् । अरूलाई हित गरियो भने स्वतः आफ्नो हीत हुन्छ भन्ने सिद्दान्त पश्चिमा ब्यबसायमा फस्टाउॅदै गएको छ । अरूलाई दुःख पु-याएर प्रप्त गरेको सफलता क्षणिक हुन्छ यो संसारमा पनि । त्यो कुरालाई युरोपियनले अहिले बुझ्दैछन् जुन कुरा हजारौं बर्ष पहिले पूर्बमा बिकास भएको थियो ।
सत्य भन्ने शब्द धेरै सुनिएको शब्द हो । तर, यसको अर्थमा भने अलि स्पष्ट नभएझैं लाग्छ । सत्य आफुप्रतिको इमान्दारिता र अरूप्रतिको इमान्दारिताको जोड हो । सत्यले सॅधै खुसी ल्याउॅछ यदी ल्याएन भने त्यहाॅ कतै गडबड छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । गान्धीले सत्यमा रहेर अहिंसात्मक आन्दोलन चलाए । मार्टिन लुथर किंग र नेल्सन मण्डेलाले पनि सत्यको ब्यबहारिक प्रयोग गरे ।
हाम्रो जीवनमा सत्यको ठूलो महत्व छ । सत्यमा अडिग रहने मान्छे स्वाभिमानी हुन्छ । सत्य जीवनको पहिलो आधार हो भन्ने कुरा संसारका धनी ब्यक्तिहरूको जीवनी पढेर प्रष्ट हुन सकिन्छ ।
यदी हामी अरूसॅग सत्य देखिन खोज्ने र आफुभित्र सत्यता नहुने हो भने त्यस्तो अवस्था देखावटी हुन सक्छ ।
चोरी नगर्नु तथा चोरी गर्ने प्रबृत्तिको नहुनु नै अस्तेय हो ।
ब्रह्मचर्यका दुई पाटा छन्
♢ ब्रह्म ज्ञानमा आफुलाई लगाउनु । ब्रह्म ज्ञानप्रतिको चासो हुनु ।
♢ ईन्द्रियजनित अथवा ईन्द्रियबाट प्राप्त हुने क्षणिक सुखलाई नियन्त्रण गर्नु वा त्यसलाई बुझेर त्यतातिरको ध्यान कम गर्नु ।
आफुलाई आवस्यक पर्ने कुराहरूको मात्र संकलन गर्नु । कुरा आवस्यक नै छैन भने त्यसको संग्रह गर्नु ठीक होइन । एक भए पुग्छ भने दुई चाॅहिदैन । दुई भए पुग्छ भने तीन चाॅहिदैन । तीन भए पुग्छ भने चार चाॅहिदैन । अरूको सामानको ईच्छा नगर्नु पनि अपरिग्रह हो । आफुसॅग जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुन सक्नु र आफुसॅग छ भन्दैमा अनावश्यक सामानहरूको संग्रह नगर्नु नै अपरिग्रह हो । आफुसॅग बढी भएको कुरा अरू कसैसॅग छैन भने त्यो अरूलाई दिनु पनि हाम्रो कर्तब्य हो ।
२. नियम : अष्टाङ्ग योग दोश्रो चरण
पतञ्जली योगसूत्रको दोस्रो सूत्र हो नियम । यम भनेको सामाजिक नैतिकता हो भने नियम भनेको व्यक्तिगत नैतिकता हो । यसअन्तर्गत पाॅचवटा नियम पर्दछन् ।
(क) शौच – शरीर र मन की शुद्धि नै शौच हो ।
(ख) संतोष – सन्तुष्ट र प्रसन्न रहनु नै सन्तोष हो ।
(ग) तप – स्वयंलाई आत्मानुशासनमा राख्नु नै तप हो । जसरी पनि आफ्नो साधनालाई जारी राख्छु भन्ने संकल्प हो तप ।
(घ) स्वाध्याय – आत्मचिन्तन गर्नु । अध्ययन गर्नु र ज्ञान सुन्नु ।
(च) ईश्वर-प्रणिधान – ईश्वरप्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धासहित ढुक्कका साथ बाॅच्नु । ईश्वरप्रति पूर्ण बिश्वास हुनु ।
३. आसन : अष्टाङ्ग योग तेश्रो चरण
सामान्यतया हामीले योगासनलाई नै सम्पूर्ण योग ठान्छौं । तर योगाआसन योगको एउटा पाटो हो । योगले हामीलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्छ । स्मरण शक्ति बढाउने र दिनभरि जागरूक बनाउॅछ आसनले । आसनले हामीमा आत्मबिश्वास जगाउनुका साथै स्वाभिमानी पनि बनाउॅछ ।
४. प्राणायाम : अष्टाङ्ग योग चौथो चरण
यो श्वास लिने खास तरिका हो । स्वासद्वारा हाम्रा कोषहरूमा अक्सिजन बृद्धि गरेर प्राणायामले मानसिक तथा शारीरिक रूपमा स्वस्थ बनाउॅछ । यसले शरीरका बिकार हटाएर शरीर, मन र प्राणलाई शुद्ध पार्छ ।
५. प्रत्याहार : अष्टाङ्ग योग पाचौं चरण
इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्नु । अरू बाहिरी आकर्षणबाट आफुलाई पर राख्नु । बाहिरी आकर्षण क्षणिक हो भन्ने बुझ्नु । चित्तलाई ईश्वर स्मरणमा लगाउने हरसम्भव प्रयास गर्नु । सानासाना लोभमा नफस्नु ।
६. धारणा : अष्टाङ्ग योग छैटौं चरण
एकाग्रचित्त हुनु । चित्तलाई एकाग्र बनाएर एउटै सहज आसनमा बस्नु । सामान्तया हामीले जसलाई ध्यान भन्छौं त्यो धारणा हो । योग गुरूहरूले सिकाउने ध्यान नै धारणा भनेर बुझ्नुपर्छ । ध्यान त सिकाउनै मिल्दैन त्यो घट्ने कुरा हो ।
७. ध्यान : अष्टाङ्ग योग सातौं चरण
धारणामा आफुलाई स्थीर गराउॅदै जाॅदा ध्यान घट्छ । ध्यान घट्दा हामीलाई चरम आनन्दको अनुभूति हुन्छ । ध्यान घटिसकेपछि हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । ध्यान घटेपछि साधकलाई अध्यात्मको रस लाग्न सुरू गर्छ र उसले त्योभन्दा आनन्दको क्षण अरू कुनै पनि अनुअव गरेको हुॅदैन । त्यसपछि सबै शास्त्र ठीक रहेछन् भन्ने महसुस गर्न थाल्छ । उसको आॅखाको हेराइमा अनौठो परिवर्तन हुन्छ । आफु र अरूमा उसले फरक देख्दैन । हरेक घटनामा धन्यबादी हुन्छ । जीवनलाई उत्सव ठानेर बाॅच्छ । जीवनको सार्थकता अनुभूति गर्छ ।
८. समाधि : अष्टाङ्ग योग आठौं चरण
आत्मासॅग जोडिनु । शब्दले ब्याख्या गर्न नसकिने परम-चैतन्यको अवस्था हो यो । समाधी दुई किसिमका हुन्छन् ।
क) सबिकल्प समाधि: केही समयका लागि समाधिमा जाने र फेरि समाधिबाट बाहिर आउने अवस्था हो यो ।
ख) निर्बिकल्प समाधि: निरन्तर समाधिमा स्थित रहने अवस्था ।